Roy Galán: ndiani iye uye ndeapi mabhuku akanyorwa nemunyori uyu | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo sosi Roy Galán: Elle
Kana paine mumwe wevanyori vanozivikanwa kwazvo ndiko kuti, pasina kupokana, Roy Galán. Uyu munyori, munyori, mukwikwidzi uye mukadzi wechikadzi ari muchimiro. Unogona kutomuziva nekuti iwe waverenga chimwe chinhu nezvake kana kuona chimwe chinhu pasocial media kana kunyange paterevhizheni.
Asi zvinogona kunge zviri izvo kuti iwe haumuzive, uye nekuda kweizvozvo isu tichaedza kukurondedzera ndiani Roy Galán, anonyora sei uye ndeapi mabhuku aakanyora. Totanga here?
1 Roy Galán ndiani
1.1 Kutanga kwebasa rako
1.2 Roy Galán semukadzi
2 Mabhuku aRoy Galán
Roy Galán ndiani
Chinhu chekutanga chaunofanira kuziva nezvaRoy Galán ndechekuti, muchokwadi, haazi rake zita chairo. Iyo zita rakazara remunyori uyu ndiRoy Fernández Galán. Zvisinei, akapa zita rake rekutanga kupa pekutanga kune wechipiri. Nekudaro, yakapihwa yakadaro.
Akazvarwa musi waZvita 22, 1980 muSantiago de Compostela asi, kunyangwe akazvarwa muGalicia, chokwadi ndechekuti huzhinji hwehudiki hwake hahuna kupedzerwa ipapo, asi kuCanary Islands. Zvakare, mhuri yake haisi mhuri yako chaiyo; Iye anouya achibva kumhuri inoverengera vabereki uye munguva pfupi yakatarisana nekurasikirwa kwevamwe amai vake, Sol, uyo akafa aine makore gumi nematatu chete. Nekudaro, iye akangogara nevamwe amai vake, Rosa.
Zvakare, iwe unofanirwa kuziva nezve uyu munyori kuti iye ane mapatya hanzvadzi, Noa Galán.
Padanho redzidzo, Roy Galán akadzidza Mutemo kuYunivhesiti yeLa Laguna uye akapedza kudzidza muna 2003. Kwemakore gumi nerimwe aive achishanda mukutungamira kweHurumende yeMadrid asi, muna11, chipembenene chekunyora chakamutorera uye akatanga kuzvipira zvakazara pabasa iri.
Uye zvakare, mu2017 aive pamazita eÍñigo Errejón kuCitizen Assembly yePodemos, uye mu2019 mune More Madrid runyorwa kuMadrid City Council naManuela Carmena.
Kutanga kwebasa rako
Roy Galán haasi murume akaisa pfungwa pamabhuku. Iine mativi mazhinji. Uye iyo huru ndeyeiyo yemunyori. Zvinozivikanwa kuti aive mudzidzi kuCanarian School of Literary Creation mumusangano pamabhuku, nhetembo, nyaya pfupi, screenplays, cinematographic kuongororwa ... .
Akamira zvakanyanya kuchikoro zvekuti akatodzidzisa makosi ezvinyorwa zvakasiyana iye.
Kekutanga nguva yaakaburitsa bhuku raive makore matatu mushure mekutarisa pakunyora, neChisingadzoreke. Zvisinei, zvinozivikanwa kuti, kuCanarian School of Literary Creation, akanyora nhevedzano yenyaya mumutambo «Uye nokudaro zvaizogara nekusingaperi», pamwe chete nevamwe vaaishanda navo.
Muna 2019 akagashira iyo Krámpack Mubairo kubva kuExtremadura International LGBT Mutambo.
Iye amene anotsanangura nzira yake yekunyora se "yakapusa", zvisinei nenyaya yekuti awane iwo iwo mavara anosvika kuvanhu kuti mukati amutse kusahadzika nemakakatanwa iye ave achida kudzidziswa kwakanaka kuti azviite. Ndiye zvakare mumwe wevanyori vanosanganisa kunyora nezvematongerwo enyika, tichifunga izvozvo kunyora "chinhu chezvematongerwo enyika."
Pamusoro pebasa rake semunyori, iye zvakare ari munyori. Muchokwadi, anoshanda pamwe chete nemagazini BodyMente, kune pepanhau redhijitari Kuonekwa kwakajairika uye kunyange ane nguva yekutora nzvimbo muwebhu yeLaSexta.
Muna 2013, paakafunga kuzvipira kunyora, Roy Galán akagadzira Facebook webhusaiti. Raive basa rake kupedza Community Manager kosi uye akatanga kunyora pazviri. Chinhu chaasina kumira kuita, kwete chete paFacebook, asiwo paTwitter ne Instagram. Uye iwe unofanirwa kuziva kuti zvese zvaanonyora zvinoonekwa uye zvakagovaniswa nezviuru zvevanhu, nekudaro iye ave anokurudzira.
Roy Galán semukadzi
Chimwe chikonzero nei Roy Galán achizivikanwa ndeche chake chirevo chevanhukadzi, pamwe nemubatsiri wechikadzi. Zvinofanira kutakurwa mupfungwa kuti mumabhuku ake anotaura nezvevakadzi, pamwe nemagariro uye muzvinyorwa zvaanoburitsa munhau.
Muchokwadi, akatora chikamu mubhuku rakanyorwa naNuria Coronado, Varume vekuenzana semumwe wevarume vakabvunzurudzwa.
Mabhuku aRoy Galán
Achifunga nezvechikamu chake chemabhuku, Roy Galán ane mabhuku akati wandei pamusika. Yekutanga yavo, Irrepetible, yakaburitswa mu2016 neAlfaguara imba yekutsikisa. Zvisinei, yanga isiri yekupedzisira yavo, asi ine zvakawanda zvakawanda.
Como mabhuku ako ane:
Hapana munhu mukati mako.
Ita kuti irege kuratidzika serudo.
Iwo mazhinji acho akanyorwa neAlfaguara imba yekutsikisa, kunze kwekunge Itai kuti iite senge rudo uye Las alegrías iyo yakazviita neInk Cloud neContinta muneni zvakateerana. Uye zvakare, ivo ndivo chete vanoburitswa mugore rimwe chete nekuti vanowanzo kuburitsa bhuku idzva kamwe chete gore rega.
Pamusoro pemabhuku ekunyora kwake, iye zvakare yakaburitsa mumabasa ekushandira pamwe, sezvavari:
(h) kuda 3 godo uye mhosva.
(h) 4 kuzvida.
Pasina kukanganwa bhuku raakaburitsa neCanary Islands School of Literary Creation, «Uye nekudaro zvingave nekusingaperi».
Iye zvino zvawava kuziva Roy Galán zvishoma, ungashinga nemabhuku ake here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Roy Galan